ပန်ဒိုရာ: အချစ် ……. ဆိုသည်မှာ
Posted by pandora at 9:38 PM
မြင်ကွင်း၃ ကို အကြီုက်ဆုံးးးး
ကပ်ဆိုက်နေတဲ့ကြားက စူးနင့်အောင်မြင်လိုက်ရတဲ့ဖခင်မေတ္တာနဲ့ မောင်နှမချစ်ခြင်းများ..
ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ စွာ ခံစားလိုက်ရတဲ့မအိုစွမ်းတဲ့ သိင်္ဂါရကံ့ကော်ခက်တွေ..
တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ သူရဲကောင်းကိုဖျားယောင်းနိုင်စွမ်းတဲ့တောပန်းလေးရဲ့ နူးညံ့မှု..
ကွဲပြားတဲ့ ချစ်ခြင်းဖွဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးတွေစုစည်းထားတဲ့ဝတ္ထုတိုကောင်းတစ်ပုဒ်
အချစ်(၆) - (သို့) အခြောက်ချစ်
ခပ်ချောချော ကောင်လေး တယောက်- ဆံပင် ညှပ် ဆိုင် ထဲသို့ဝင်လာသည်။ သူ့မျက်လုံးက..တစုံတယောက်ကို ရှာဖွေ နေသလိုလို- ပြီးမှ ပြုံးသွားသည်။
ခပ်တည် တည် ..ပြီးတော့ သက်တောင့်သက်သာ ဆံညှပ် ခုံ မှာ ၀င်ထိုင် လိုက်တော့..
ပူနွေးနွေးလက်တစုံ သူ့လည်ပင်းကို လာထိ သည်။ သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ- လှုပ်ရှားမူ တချို့ ပြေးလွှားနေသည်။ ပြီးတော့..ရေ.. အမွှေးနံ့..အေးမြမူ.. ခပ်ဖွဖွ..လက်ချောင်းများ..။ မျက်စိ ကို အသာပိတ်ရင်း.. ဇိမ်ယူ ပြစ်လိုက်သည်။
` ဟင်း..မှန်ထဲ မှာ ကြည့်စမ်း..လန်းနေတာပဲ..နောက်တခါ..ဆံပင် သိပ်ရှည်အောင် မနေနဲ့လေ-ကောင်လေး...သြော်..ပိုက်ဆံ ပေးမလို့.. ငါ့ကိုများ..ပိုက်ဆံပေးစရာလာ.. ဒါဆို နောက်တခါ လာမညှပ်နဲ့..´
တနာရီခန့်အကြာ..မာမီအောင် ရဲ့ ဆိုင် လေး ထဲက..ကောင်လေး ..လက်ပြရင်း..ထွက်ခွါသွားသည်။
(ပန်ဒိုရာ- ၏ အချစ် ဖွဲ့အား..ခင်မင်စွာဖြင့်..နောက်ပြောင် ပါသည်။ အားလုံး..ဖီလင်အောက်စေသောဝ်)
မချီးကျူးတတ်အောင်ကို ကောင်းတယ် မကြီးပန်ရေ
ကွန့်မန့်ကောင်းကောင်း မရေးပေးတတ်တာကလဲ ဒုက္ခပါပဲနော် :)
ကိုမောင်ရင် ရေးပေးသလိုပါပဲဗျို့ :)
အနော်လဲ အဲလိုမြင်တယ်ဗျ :)
အချစ်တွေကို ရေးပြထားတာ ပါးပါးလေးနဲ့ လှတယ်။
ဒါနဲ့ ပန်ပန့် အချစ်ကရော..
အချစ် ၃ ကို သဘောကျတယ်ဗျာ... ကျနော်လည်း သစ်ပင် ကောင်းကောင်း တက်တတ်အောင် ကျင့်ပါဦးမယ်။ နှစ် ၅၀ လောက်တော့ အချိန်ရပါသေးတယ်။ :)
ွှအချစ်(၁) - ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးခံစားသွားတယ်..။
အချစ်(၂) - မတွေးရဲဘူး အဲဒီလိုအဖြစ်မျိူး။
အချစ်(၃) - အဘွားကြီးကဘာပြန်ပြောလဲသိချင်ပါတယ်။
အချစ်(၄) - သိပ်နားမလည်ပါ..။
အချစ်(၅) - "......" ကသီလရှိတဲ့လူမှမြင်ရတာလား.. :PP။
အချစ် တစ်နဲ့သုံးကို အထူးသဘောကျမိပါတယ် အမြဲမရောက်ပေမယ့် မကြာခဏလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် စာအရေးကောင်းသူအဖြစ် သတိထားမိပါတယ်။ ရသ၊ မဟုတ်ရင် သုတတစ်ခုခုပေးတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ဦးလုိ့မြင်မိပါတယ်။ ရသ၊ သုတတစ်စုံတရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြင်ကွင်းစုံ ဘ၀စုံကိုအချစ်တေါ ခင်းပြသွားလိုက်တာ....
မပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုလေးကိုတော့ ရင်ထဲပိုထိတယ်...။
ဒါဟာ ၀တ္ထုတိုတဲ့လား.. မဟုတ်ဘူးထင်တာပဲ...
မပန်ရဲ့ အချစ်တွေ ဖတ်ပြီး heart ထိသွားပြီ။ မပန်ကရော ဘယ်အချစ်ထဲ ပါလဲ?? :) မကေရဲ့ အချစ် (၆) ကိုပါ တလက်စတည်း ဖတ်လိုက်ရတယ်... :D
မပန် ကောင်းတယ်....။ အဘိုးကြီးနဲ့ အဘွားကြီး စုံတွဲကို သဘောအကျဆုံးပဲ ဟဲ။ အချစ်၂ အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါ။ နောက်ဆုံး အချစ်၅ ကိုတော့...လိုသလို တွေးယူလိုက်သည်....။
မကေရဲ့ အချစ်၆ ကိုလည်း ကြိုက်ပါရဲ့။
မပန်ရော မကေရော ရေးတတ်လိုက်ကြတာ
ဒေါ်လေးတို့ ကတော့ လက်စွမ်းပြလိုက်တာ ကောင်းချက်ဗျာ ဒန်ပေါက် နဲ့ကြက်သားစားလိုက်ရသလိုပဲ ..။ မိသားစုအချစ်လေးဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝဲမသလားတောင်မသိ ။ ကောင်းတာပဲသိတယ် ဆရာမရေးတာမြင့်တော့ တပည့်ကမသိတော့ဘူးး)
အချစ် (၃) ကို ကြိုက်တယ်...။ ဆက်ရေးချင်တာလေးတွေ ရှိသေးပေမယ့် ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ထားလိုက်တယ်... ဆိုပါလား...။ မရပ်ထားပါနဲ့ပန်ပန်ရေ... ရှိသေးတာများကို ဆက်ရေးလိုက်ပါ...။ မျှော်နေမယ်...။
တို့ လဲ အချစ် ၃
အချစ် ၃ က မဲအများဆုံးပါလား..
ဒါထက်… အချစ် ၅ ဘယ်ပျောက်… အော် သိပြီ… ပန်ဒိုရီဆီရောက်…
ကေ့ အချစ် ၆ ကလဲ မိုက်မှမိုက်…
came,read and enjoy...
မမြတ်နိုး၊ ကိုမောင်ရင်၊ ညိမ်းညို မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူး။
မကေ... အဲဒီအချစ်က အလှဆုံးပဲနေမယ်။ ဘယ်ဖီးလ် အောက်လိမ့်မတုန်း။ ပိုတောင် ဖီးလ်တက်သွားတယ်။ တနားပါဒယ်နော်။ တဖက်သက်အချစ်ဟာ ဆိုးပါသည်.. တဲ့။
မမိုးချိုသင်း... ပန်ပန့်အချစ်လား။ အနားမနေ ပြေးလွှားနေရလို့ ဟောဟိုက ရေသဖန်းပင်ကြီးပေါ်မှာ ချိတ်ထား၇တယ်လေ။
ဖြိူး.. တချစ်ချင်း ကောက်ချက်ဆွဲသွားတာ ကျေးဇူး။ ဟုတ်ပ။ အချစ် ၅ က သီလရှိမှမြင်ရတယ်။
ကိုဆူး ကိုအောင်သာငယ် မနုစံ ပုံရိပ် sonata-cantata မောင်မျိုး မနော် မသက်ဝေ မတန်ခူး မှုးဒါရီ.. အတူတူ ခံစားပေးတာ ကျေးဇူး။ ပန်ဒိုရာ့အချစ်ကတော့ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို..။